boosaaso – Janaay Media
07:25: PM Wednesday August 21, 2019
Taliyaha Booliska Puntland oo sheegay in la soo qabtay nin Boosaaso ku dilay ruux ganacsade ahaa
Laamaha ammaanka Puntland ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigay nin dil habeen hore u gaystay nin ganacsade ahaa oo lagu dilay Bartamaha Magaalada Boosaaso. Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland Jeneraal Muxudiin Axmed Muuse, ayaa sheegay hawlgal Ciidamada booliska ay sameeyeen in lagu soo qabtay ruux ka mid ahaa shaqsiyaadka dilalka ka gaysta Magaalada. Wuxuu sheegay
Ganacsade Salaad Cabdi Cukaash oo Lagu Dilay Boosaaso
Faah-faahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaayo dil kooxo hubeeysan ay habeenimadi xalay aheeyd ku dileen ganacsade caan ka aha magaalo xeebeedka Boosaao ee gobalka Bari. Ganacsadaha la dilay ayaa lagu magacaabi Jirey Salaad Cabdi Cukaash,wuxuuna xisaabiye u ahaa shirkad ganacsi oo lagu magacaabo Horseed. Sida ay Jinaay Media u xaqiijiyeen goobjoogayaal kooxo bastooladdo ku
Dilaagi Magaalada Boosaaso ugu gaystay Paul Anthony Farmosa oo u geeriyooday dhaawac soo gaaray
Posted by Abdikadar Hassan - February 5, 2019
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari ayaa waxa ay sheegayaan in xalay Isbitaal halkaasi ku yaalla uu ku geeriyooday Ninkii ka dambeeyay dilkii maamulihii dekadda Boosaso ee shirkadda P&O Ports, Paul Anthony Farmosa. Ninka dilkaasi ka dambeeyay ee geeriyooday ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Ibraahim Maxamed, waxaana dhaawacay Ciidamo ka mid